Iinkcukacha-manani zokuKhula koSasazo lwezeNtlalontle ngo-2015 | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 23, 2016 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 23, 2016 Douglas Karr
Ijenali yeeNjini zokuKhangela iphuhlise ingxelo yesithathu yonyaka ye-infographic kwi ukukhula okuqhubekayo kweendaba zosasazoUkubonelela ngeenkcukacha manani kuyo yonke inethiwekhi yoluntu ukuya kuthi ga ngo-2015. Ivula ngesi sicatshulwa kuGary Vaynerchuk.
Xa ndisiva abantu bexoxa nge-ROI yemithombo yeendaba? Indenza ndikhumbule ukuba kutheni uninzi lwamashishini lusilela. Uninzi lwamashishini aludlala imarathon. Badlala isprint. Abakhathazeki malunga nexabiso lobomi kunye nokugcinwa. Banexhala ngeenjongo zexesha elifutshane. UGary Vaynerchuk
Ndingumlandeli kaGary V, kodwa andikholelwa ukuba ikhowuti ichanekile, kwaye ayikrweki umphezulu. Ndiyazi kuqala umceli mngeni wokusebenza kweshishini kunye nokunxibelelana ngemithombo yeendaba zentlalo. Ndikhathazekile malunga nexabiso lokuphila kwabaxhasi bethu kunye nokugcinwa kwabo. Asibulawuli ubukho beendaba zethu ngokugqibeleleyo, kwaye siyinkampani yemidiya entsha!
Andikhange ndiye kwishishini okwangoku apho abasebenzi bebemi bengenzi nto endaweni yoko yokuzibandakanya nzulu kwi-Intanethi kunye nethemba kunye nabaxhasi. Njengoko sisebenza kunye nabaxumi kwaye sibanika ingxelo malunga nokuphucula ukusebenzisa kwabo imidiya yoluntu, siyayibona imiceli mngeni abanayo kuqala.
Amashishini amaninzi awanabunewunewu utyalo kwizixhobo kunye nabasebenzi abafanelekileyo ukuba basebenzise imidiya yabo. Iingcebiso ezinje ngokulungiselela uhlaziyo lwentlalo ngokusekwe kwisiteshi kunye nokuzibandakanya kuyo yonke imini okanye ukufikelela nje kuyo.
Amashishini anjalo umngeni ngokuncipha kwemida yenzuzo kunye nokwanda kokhuphiswano kushishino lwabo. Ayenzeki kuba bengakulungisi uhlaziyo lwabo kuFacebook. Isicwangciso sexesha elide asinamsebenzi kakhulu xa ufuna isikhokelo ngoku ukugcina izibane zikhanya.
Amashishini anjalo ayinakho le isicwangciso kunye noqeqesho izixhobo zokufundisa abasebenzi babo ekuphumezeni isicwangciso esiliqili seendaba zentlalo. Siphuhlisa ezo nkqubo, kodwa ayinguye wonke umntu onokufikelela kutyalo-mali. Ndiyavumelana noGary V ukuba ukungatyali Unokupela intshabalalo kwinkampani yexesha elide kwaye utyalo-mali luya kuhlawula. Kodwa uninzi lwamashishini kunye nabasebenzi babo bakwindawo esembindini ngoku.
Iinkampani ezisandula ukwenziwa zihlala zivuna izibonelelo zemidiya yoluntu. Yayendele njengenxalenye ye-DNA yabo ukusukela ngala mhla baqalisa ngayo ishishini labo. Ngapha koko, ishishini labo lisenokuba liye laqhuma kwi-Intanethi kuba babesandula ukwamkela. Ayilulo uninzi lwamashishini, nangona kunjalo. Uninzi lweenkampani ziifemu zelifa ezazinempumelelo yokuthengisa kunye neendlela zokuthengisa ezikhoyo kumashumi eminyaka- kwaye imithombo yeendaba zentlalo yayingeyonxalenye yomxube.
Ndiyakuthanda ukuthetha kumashishini emveli, amafa. Ngapha koko, ndenze nje u intetho ephambili kunye neenkokheli zeshishini ezivela kwiinkampani zezezimali nezamandla. Khange ndibagxeke ngokuba ziingcinga zexesha elifutshane- akunjalo. Into endiyenzileyo, endaweni yoko, bendinencoko enyanisekileyo malunga nokuziphatha komthengi kunye nomthengi oshishino ofuna bavumelane.
Enye indlela yokucinga ngemidiya yoluntu kukulinganisa ukuthengisa kunye nokuthengisa ngokwesiko. Ukuba kukho inkomfa yemizi-mveliso apho amathemba akho atshona khona, ishishini lakho liya kutyala imali emnqubeni kwaye lithumele elona qela lakho lomeleleyo kulo msitho. Iqela lakho lokuthengisa liya kuba nzima emsebenzini ukubonelela ngesiqinisekiso esifanelekileyo kunye nokubeka uphawu kwisikhululo sakho ukutsala abadlulayo.
Kumsitho, iqela lakho lokuthengisa liya kubandakanyeka kwiincoko ezinentsingiselo kunye nabathengi kunye nethemba. Baza kuphendula imibuzo esisiseko evela kubantu abanomdla wokuzimasa. Baza kuthungelana ngamandla ukukhulisa ixesha labo kunye nokufikelela kumsitho. Kwaye banokumema amathuba anokwenzeka kwincoko ezinzulu malunga neziselo kunye nesidlo sangokuhlwa.
Nokuba ungaluphi uhlobo lomsitho, akuthandabuzeki ukuba ubuchwephesha bakho bokuthengisa buya kuma nje buye kulinda umntu ukuba abuze umbuzo, okanye uphume uye kwithemba ngalinye lokuphindaphinda umnikelo ngapha nangapha. Amathuba afanayo akhona kwimidiya yoluntu. Kodwa amajelo eendaba kwezentlalo abonelela ngenkomfa yehlabathi kushishino unyaka wonke, eqhuba iyure yonke imihla.
Kubasebenzisi abasebenzisa i-intanethi abazizigidi ezi-3 kwihlabathi liphela, i-2.1 yezigidigidi ineeakhawunti zosasazo zasekuhlaleni ezine-1.7 yezigidigidi zabasebenzisi
Abathengi bakho balapho. Ithemba lakho likho. Uphando abalufunayo bobabini lukhona. Kwaye okhuphisana nabo bakho. Phantse lonke uhambo lwabathengi lubandakanya imithombo yeendaba zentlalo, ukusuka kulwazi ngokuguqula, kule mihla. Ukuqonda oko kubalulekile kumashishini atyale imali ekunyuseni ubukho beendaba zosasazo, ukuziqhelanisa nemiceli mngeni eyizisayo kunye nokwamkela ubuchule obonyusa iziphumo zeshishini.
Nanku ukujonga ukukhula okuqhubekayo kweendaba zosasazo, kwihlabathi liphela, ngo-2015:
tags: UGary vgary vaynerchukgary veeImidiya yokuncokolaamanani eendaba ezentlalo